Sawirkii 9- diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland.
Sawirkii 8- diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland.
Waxaa Wali si habsami leh uga socda xarunta dhexe ee Guddiga KMG doorashooyinka Puntland diiwaan galinta ururada siyaasadda ee doonaya inay ka qaybgalaan tartanka doorasho qof iyo cod ah, oo ka qabsoonta dowladaha hoose ee Puntland, oo Saacado uun ka hartay waqtigii loo qabtay inay kuso dhamaystiraan shuruudaha iyo formka diiwaan...	more →
Sawiradii 7- diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland.
admin / 14th March 2020 / No Comments
Waxaa Wali ka socda xarunta dhexe ee Guddiga KMG doorashooyinka Puntland diiwaan galinta ururada siyaasadda oo muddo kooban ka hartay waqtigii loo qabtay oo ah 15 March 2020, 05:00 Galabnimo. Fg:- Magacyada ururada siyaasada ee is diiwaan galiyay waxaan so bandhigi doona markii ay dhamaato hubinta buuxinta shuruudaha ururada...	more →
Wali waxaa ka socda xarunta dhexe ee Guddiga KMG doorashooyinka Puntland diiwaan galinta ururada siyaasadda oo muddo kooban ka hartay waqtigii loo qabtay oo ah 15 March 2020, 05:00 Galabnimo. Fg:- Magacyada ururada siyaasada ee is diiwaan galiyay waxaan so bandhigi doona markii ay dhamaato hubinta buuxinta shuruudaha ururada...	more →
Sawirkii 5aad – diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland.
Wali waxaa ka socda xarunta dhexe ee Guddiga KMG doorashooyinka Puntland diiwaan galinta ururada siyaasada oo soo bilaamatay 15 December 2019 kuna eg 15 march 2020 05:00 galabnimo oo inaga xigto maanta oo qura. Fg:- Magacyada ururada siyaasada ee is diiwaan galiyay waxaan so bandhigi doona markii ay dhamaato hubinta buuxinta...	more →
admin / 12th March 2020 / No Comments
Wali waxaa ka socda xarunta dhexe ee Guddiga KMG doorashooyinka Puntland diiwaan galinta ururada siyaasada oo soo bilaamatay 15 December 2019 kuna eg 15 march 2020 oo inaga xigaan 3 bari oo qura.Waxaa galabta codsiga diiwaan galinta ururada soo gudbiyay qaar kamida siyaasiyiinta Puntland. Fg:- Magacyada ururada siyaasada ee is...	more →
Sawiradii 3aad – diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland
• Waxa si habsami leh uga socda xarunta dhexe ee Guddiga doorashooyinka Puntland diiwaan galinta ururada siyaasada Puntland oo soo bilaamatay 15 December 2019 kuna eg 15 march 2020 oo inaga xigto 3 bari oo qura. #CodkaaguWaaXaqaaga #CodkaaguWaaMustaqbalkaaga TPEC Puntland Garowe Office more →
Sawiradii 2aad – diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland.
• Waxa si habsami leh uga socda xarunta dhexe ee Guddiga doorashooyinka Puntland diiwaan galinta ururada siyaasada Puntland oo soo bilaamatay 15 December 2019 kuna eg 15 march 2020 oo inaga xigto 3 bari oo qura. #CodkaaguWaaXaqaaga#CodkaaguWaaMustaqbalkaaga TPEC Puntland Garowe Office more →
admin / 23rd February 2020 / No Comments
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa maanta kulan baalaaran la qaatay masuuliyiin ka socda hay’adaha dawladda, siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee Puntland. kulanka oo noqodoona mid 3 biloodle ah waxaa guddigu kusoo bandhigidoonaa wixii qabsoomay 3da bilood ee tagay, wixii caqabado ah iyo doodwadaag dhexmaridoona...	more →